Ny Antemoro na Antaimoro dia foko ao amin'ny tapany atsimo atsinanan'i Madagasikara, ao amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany. Nampalaza ny foko Antemoro teo amin'ny tantara ny fanoratana ny Sorabe, ny famakiana ny kintana (Fanandroana), fandravonana ny disadisa nisy tamin'ireo foko sasany tany atsimon'i Madagasikara. Eo anelanelan'i Namorona sy Manampatrana no fonenany. I Vohipeno sy i Manakarano tanàna lehibe any aminy. Niisa 500 000 any ho any ny Antemoro tamin' ny taona 2013.
Ny anaran'io foko io dia avy amin'ny teny hoe "morona". Araka ny lovantsofina dia manana ny fiaviana arabo ny Antemoro. Avy amin'ny anaran'io foko io no niavian'ny taratasy antemoro izay natao ho fanaingoana. Ny Antemoro no nitondra ny sorabe voalohany tao Madagasikara. I Ramakararo no mpanjaka voalohany tao izay nipetraka tao Ivato, ka antsoina hoe Fenovola ny lapany. Nampalaza ny foko Antemoro teo amin'ny tantara ny fanoratana ny Sorabe, ny famakiana ny kintana (fanandroana), fandravonana ny disadisa nisy tamin'ireo foko sasany tany atsimon'i Madagasikara. Anisan'ny Antemoro nalaza ireo nafaran'Andrianampoinimerina ho lasa mpanolo-tsainany sy nampianatra an-dRadama I.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antemoro&oldid=998616"
Dernière modification le 25 Novambra 2020, à 11:32
Voaova farany tamin'ny 25 Novambra 2020 amin'ny 11:32 ity pejy ity.